कीवर्डहरू, सामग्री फ्रिक्वेन्सी र एसईओ
एसईओ को लागी ताजा सामग्री को महत्त्व
बिहीबार, नोभेम्बर ०,, २०२० बिहीबार, जुलाई 18, 2013 Douglas Karr
मैले मानिसहरूलाई लामो समयको लागि भनेको छु कि मार्केटिंगको लागि पुरानो उखान सामग्रीमा पनि लागू हुन्छ। रिसेन्सी, फ्रिक्वेन्सी र सामग्रीको मान कुञ्जी हो। यसकारण ब्लगिंग सामग्री मार्केटि strategy रणनीतिको लागि यति महत्वपूर्ण छ ... यसले तपाईंलाई प्रायः लेख्न अनुमति दिन्छ। तलको चार्ट हाम्रो ग्राहकहरु मध्ये एक हो। हामीले उनीहरूको साइटलाई अप्टिमाइज गर्‍यौं र, केही अफ-साइट प्रमोशनको साथ, तिनीहरू केहि अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्रमवारीमा उफ्रिए।
यद्यपि धेरै महिना पछि विभिन्न सामग्रीमा नयाँ सामग्रीहरू पाउन गाह्रो भइरहेको थियो। टोली सामग्री लेख्ने धेरै व्यस्त थियो त्यसैले हामीले उनीहरूका लागि सामग्री लेखक लिनुभयो। कम्पनीले आफ्नो उत्पादन र समाचारमा ध्यान केन्द्रित गरेको बेलामा, हाम्रो प्रतिलिपि लेखकले सामान्य सुझावहरू र उद्योगका लागि सबै भन्दा राम्रो अभ्यासहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो। हामीले केवल कुञ्जी शब्दहरूको साथ धेरै शीर्षकहरू प्रदान गर्‍यौं जुन कर्षण पाइँदैन, र voilà!
चार्ट बाट हो Semrush, जसले million० मिलियन रैंकिंग कीवर्डहरूमा शीर्ष रैंकिंग डोमेनहरू क्याप्चर गर्दछ। यस ग्राहकले उनीहरूको कीवर्ड संख्या मात्र बढाएन को लागी रैंकिंग, उनीहरूको समग्र स्तर पनि राम्रो भयो। तपाईंको साइट सामग्री को साथ बासी हुन नदेऊ।
भर्खरको, लगातार र बहुमूल्य सामग्री प्रदान गर्नाले केवल भ्रमणहरू ड्राइभ गर्ने छैन, यसले तपाईंको खोज इञ्जिन अनुकूलनको साथ पनि मद्दत गर्दछ!
टैग: सामग्री मार्केटिङकिवर्डखोज इन्जिन अनुकूलनएसईओ
गोपनीयता बनाम मा फेसबुक बनाम फेसबुक
जियोसोकियल र स्थान-आधारित प्रयोगकर्ता दत्तक
डग, ठीक छ, के यो सामग्री थियो जसले विशेष गरी उनीहरूको मेट्रिक्सलाई बढावा दियो, वा मानिसहरूले सामग्री हेरेपछि गरेका कार्यहरू? म तपाईको "नम्बर म्याटर" पोष्ट द्वारा वास्तविकतामा फर्किएको छु (https://martech.zone/numbers-matter/ )। 😉 जोन
यस अवस्थामा, तिनीहरूसँग अन्य कुञ्जी शब्दहरूमा सामग्री छैन जुन तिनीहरूले श्रेणीकरण गर्नुपर्छ। छोटकरीमा, तपाईले खोजशब्दहरूको थप संयोजनहरूमा रैंक गर्न सक्नुहुन्न वास्तवमा उनीहरूलाई उल्लेख गर्ने पृष्ठहरू बिना! 🙂